“လှိုင်သာယာ မီးလောင်မှု မှာ သေဆုံး ခဲ့ရတဲ့ (၁၇) နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး” – Let Pan Daily
“လှိုင်သာယာ မီးလောင်မှု မှာ သေဆုံး ခဲ့ရတဲ့ (၁၇) နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး”
လှိုင်းသာယာ အမှတ် ၉ ရပ်ကွက် BOC မီးလောင်ဖြပွား ခဲ့မှူ့ မှာသေဆုံးသွားတဲ့ ညီမငယ်လေးရှင်းသန့်ဖြူ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေကွယ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေအိမ် တစ်လုံး မီးလောင်ကျွမ်း ခဲ့သဖြင့် မြေးအဘွားနှစ်ဦး သေဆုံးမှု ဇွန် ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဇွန် ၁၂ ရက်၊ နံနက် ၅ နာရီခွဲကျော်ခန့်တွ င် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အမှတ် ၉ ရပ်ကွက်၊ မိုးမခလမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ် တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရ သဖြင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြားတာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်မှုမှာ level 1 အဆင့်ဖြစ်သော် လည်း အဆိုပါနေအိမ် ရှိ အသက် ၅၅ နှစ်နှင့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တို့မှာ ရေချိုးခန်းအတွင်း မီးခိုးမွှန်ကာ သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး နဲ့ သူ့အဖွားတို့က သေဆုံးသွား ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့အိမ်က လေဖြတ်နေတဲ့ အဘိုးတစ်ယောက် ကိုလည်း လှိုင်သာယာထဲမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကယ်ထုတ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုသေဆုံးလဲတော့ မသိပါဘူး။ မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေတော့ တွေ့ပါတယ်” ဟု သေဆုံးသူ နှစ်ဦးအား ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ရွှေဥဒေါင်း လူမှုကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သေဆုံးခဲ့သည့် ဒေါ်….(၅၅)နှစ် နှင့် မ…(၁၇) နှစ်တို့အား ရွှေဥဒေါင်းလူမှု ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ ယာဉ်ဖြင့် ဆေးရုံသို့ တင်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းရာနေရာသို့ မီးသတ်ယာဉ် ၉ စီးနှင့် သန္ဓေတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈၁ ဦး၊ အရန်မီးသတ် ၄၃ ဦးဖြင့် ငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းသည့် နေအိမ်မှာ ပေ ၂၀ ပေ ၆၀ ခြံအတွင်း ဆောက် ထားသည့် အာစီနှစ်ထပ်အိမ် ဖြစ်ပြီး ဘုရားစင်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင် ဖြင့် ဘုရားမီးပူဇော်ရာမှ စတင်လောင်ကျွမ်း ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အား လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့မရဲစခန်းမှ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၂၈၅/၃၀၄-က ဖြင့် အိမ်ရှင်အမျိုးသားအား အမှုဖွင့်ထားကြောင်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“လှိုငျသာယာ မီးလောငျမှု မှာ သဆေုံး ခဲ့ရတဲ့ (၁၇) နှဈ အရှယျ မိနျးကလေး”
လှိုငျးသာယာ အမှတျ ၉ ရပျကှကျ BOC မီးလောငျဖွပှား ခဲ့မှူ့ မှာသဆေုံးသှားတဲ့ ညီမငယျလေးရှငျးသနျ့ဖွူ ကောငျးရာသုဂတိလားပါစကှေယျ.. လှိုငျသာယာမွို့နယျတှငျ နအေိမျ တဈလုံး မီးလောငျကြှမျး ခဲ့သဖွငျ့ မွေးအဘှားနှဈဦး သဆေုံးမှု ဇှနျ ၁၂ ရကျ နံနကျပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့သညျ။
ဇှနျ ၁၂ ရကျ၊ နံနကျ ၅ နာရီခှဲကြျောခနျ့တှ ငျ လှိုငျသာယာမွို့နယျ၊ အမှတျ ၉ ရပျကှကျ၊ မိုးမခလမျးရှိ နအေိမျတဈအိမျ တှငျ မီးလောငျကြှမျးမှု ဖွဈပှားကွောငျး သတငျးရ သဖွငျ့ မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ အခွားတာဝနျရှိသူမြား သှားရောကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ မီးလောငျမှုမှာ level 1 အဆငျ့ဖွဈသျော လညျး အဆိုပါနအေိမျ ရှိ အသကျ ၅၅ နှဈနှငျ့ အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျ မိနျးကလေး တို့မှာ ရခြေိုးခနျးအတှငျး မီးခိုးမှနျကာ သဆေုံး ခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“၁၇ နှဈအရှယျ ကောငျမလေး နဲ့ သူ့အဖှားတို့က သဆေုံးသှား ပါတယျ။ ပွီးတော့ အဲ့အိမျက လဖွေတျနတေဲ့ အဘိုးတဈယောကျ ကိုလညျး လှိုငျသာယာထဲမှာရှိတဲ့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့က ကယျထုတျပေး ခဲ့ပါတယျ။ ဘယျလိုသဆေုံးလဲတော့ မသိပါဘူး။ မီးလောငျဒဏျရာတှတေော့ တှပေ့ါတယျ” ဟု သဆေုံးသူ နှဈဦးအား ဆေးရုံသို့ သယျဆောငျပေးခဲ့သညျ့ ရှဥေဒေါငျး လူမှုကူညီ ကယျဆယျရေးအသငျးမှ တာဝနျရှိသူတဈဦးက ပွောကွားသညျ။
သဆေုံးခဲ့သညျ့ ဒျေါ….(၅၅)နှဈ နှငျ့ မ…(၁၇) နှဈတို့အား ရှဥေဒေါငျးလူမှု ကူညီ ကယျဆယျရေးအသငျးမှ ယာဉျဖွငျ့ ဆေးရုံသို့ တငျဆောငျပေးခဲ့ပွီး မီးလောငျကြှမျးရာနရောသို့ မီးသတျယာဉျ ၉ စီးနှငျ့ သန်ဓတေပျဖှဲ့ဝငျ ၈၁ ဦး၊ အရနျမီးသတျ ၄၃ ဦးဖွငျ့ ငွိမျးသတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မီးလောငျကြှမျးသညျ့ နအေိမျမှာ ပေ ၂၀ ပေ ၆၀ ခွံအတှငျး ဆောကျ ထားသညျ့ အာစီနှဈထပျအိမျ ဖွဈပွီး ဘုရားစငျပျေါတှငျ ဖယောငျးတိုငျ ဖွငျ့ ဘုရားမီးပူဇျောရာမှ စတငျလောငျကြှမျး ခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး မီးသတျတပျဖှဲ့မှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။ အဆိုပါ ဖွဈစဉျအား လှိုငျသာယာ (အနောကျပိုငျး) မွို့မရဲစခနျးမှ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၂၈၅/၃၀၄-က ဖွငျ့ အိမျရှငျအမြိုးသားအား အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး မီးသတျတပျဖှဲ့မှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။
မြေစာပုံ ပြိုတဲ့အထဲ ပါသွားတဲ့ သား အတွက် ရူးမတတ် ငိုကြွေးနေ တဲ့ အဖေ နဲ့ အမေ(ရုပ်/သံ)
ညီလေးပေးတဲ့ ဂဲ အောင်ခဲ့ရင် လပ်ကီး ပေးမယ်လို့ စိတ်ထဲက ပြောခဲ့တာ ညီလေး မကြားနိုင်တော့ဘူး ….
ရန်ကုန် မှာ မိုးကြီး လို့ မြို့နယ် တချို့ရေကြီးရေလျှံ
“ငါ့သမီး ဒီလောက်ထိတာ သူ့မောင်လေးကို ထိမှာစိုးလို့ ကာလိုက်တာ နေမှာ” တဲ့ . . .